Global Voices teny Malagasy · 23 Novambra 2011
Tantara tamin'ny 23 Novambra 2011
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana23 Novambra 2011
Ny Kabinetran'i Dokotera Essam Sharaf dia vao avy nanontany raha afaka ny hametra-pialana izy ireo ary ny Supreme Council for Armed Forces(SCAF) na ny Filankevitra Ambonin'ny Hery Mitam-piadiana dia mbola eo an-dalam-pandraisana fanapahan-kevitra na ho ekena ilay fametraham-pialana na tsia. Ho an'ireo mafàna fo sy mpanao hetsi-panoherana niady tamin'ny polisy...
Filipina : Nosamborina Ilay Filoha Teo Aloha
Azia Atsinanana23 Novambra 2011
Ilay Filohan'i Filipina teo aloha Gloria Arroyo dia napetraka eo ambany 'fanaraha-maso ao amin'ny hopitaly' taorian'ny niampangana azy tamin'ny fanakorontanana fifidianana. Fanehoan-kevitra anaty aterineto maro no nahatonga ilay tenifototra #ArroyoArrest ho iray amin'ireo lohahevitra malaza indrindra eran-tany.
Amerika Latina23 Novambra 2011
Ny 31 Oktobra 2011, nandefa andianà fepetra mba hanaraha-maso ny fivarotana ireo vola vahiny ny governemanta arzantina. Ireo fepetra ireo dia natao mba hanatsaharana ny fiakaram-bidin'ny dollar Amerikana Tavaratra, ka tao anatin'izany ny Banky Foiben'i Arzantina, noho izany, dia tsy maintsy nampidina ny tahiriny mba hialàna amin'ny fitohizan'ny fidinan'ny sandàm-bola...